You are at:Home»Life Style»Category: "Relationship" (Page 3)
ချစ်သူကောင်မလေးက ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာကို မပြောပဲသိစေမယ့် အချက်များ
ကိုယ့်ချစ်သူကောင်မလေး ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာကို မပြောပဲသိနေဖို့က ချစ်သူကောင်လေးတွေရဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်လို့ပဲပြောရမလား? ဝတ္တရားရှိတယ်လို့ပဲပြောရမလား? ဘယ်လိုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကောင်မလေး ဘာလိုချင်တာကို မပြောပဲသိနေဖို့ဆိုတာ ကောင်လေးတိုင်းရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။
ကိုယ့်ချစ်သူက နိုင်ငံခြားသွားပြီးအလုပ်လုပ်နေရ၊ ကျောင်းတက်နေရတာမျိုးကြောင့် ဝေးကွာနေတတ်ကြသလို၊ Internet မှာ ရည်းစားတွေဖြစ်ကြပေမယ့် နေထိုင်ရာအရပ်ဒေသမတူတာကြောင့်အ
ဘာကြောင့်ခုထိ single ဖြစ်နေရတာလဲ
ရုပ်ကလဲ ချောတယ်။ စိတ်ထားလေးလဲ ကောင်းတယ်။ အပေါင်းအသင်းလဲ တတ်တယ်။ ဒါနဲ့များ ဘာလို့ single ဖြစ်နေတာလဲ ဆိုပြီး ခဏခဏ လာမေးတာ ခံနေရပြီလား? တစ်ခါတစ်လေဆို…
ကိုယ် Crush နေတာသူသိအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ
မိန်းကလေး ဖြစ်ရတာ မလွယ်ပါဘူး… သူ့ကို crush နေပေမယ့် ကိုယ်က မိန်းကလေးဆိုတော့ သွားပြောရမှာလဲ ရှက်စရာကြီး… ဒီတော့ ကိုယ် crush နေကြောင်းသူသိအောင် ဒီလို…
သင်ရဲ့ ကလေးငယ်တွေကို နွေရာသီမှာ ဘယ်လိုဂရုစိုက်မလဲ
သင်ဟာ မိခင်တစ်ဦးလား? သင့်မှာ ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိနေပြီဆိုရင် ယခုလိုနွေရာသီမှာ သင့်ကလေးငယ်ကို ဘယ်လိုဂရုစိုက်မလဲ? နွေရာသီမှာ ကလေးကို ဘယ်လိုရေချိုးပေးရမယ်၊ ဘယ်အဝတ်အစားတွေက သင့်တော်မယ် ဒါတွေစဉ်းစားပြီး ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ရည်းစားဟောင်းကို ဘယ်လို ပြန်ကြိုးစားမလဲ
ပူပူ နွေးနွေး အသည်းကွဲနေတယ်၊ ရည်းစားဟောင်းကို ပြန်တမ်းတနေတယ်… ဒါဆို ဒီစာကို ဖတ်သင့်ပါပြီ။ ချစ်တိုင်းလဲ မညားတတ်တဲ့ လောကကြီးပဲ ချစ်သူ ၂ ယောက်လဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့…
စိတ်နာသွားနိုင်တဲ့ အချက် (၅) ချက်
ချစ်သူနှစ်ယောက် ချစ်လျှက်နဲ့ ကွဲသွား နိုင်ပါတယ်။ ချစ်သူနှစ်ယောက် ဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်မှုနဲ့ ရှေ့ဆက်ခရီး ဆက်ပြီး နှစ်ယောက်ပေါင်း တစ်ဘဝကို တည်ဆောက်ဖို့ ရည်ရွယ်ထား…
သင့်ချစ်သူက သင့်အပေါ်သစ္စာရှိမယ့်သူဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်အပေါ်သစ္စာရှိမယ့်သူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ အပေါ်ယံအချက်တွေကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ လိမ်လည်လှည့်ဖျားတတ်သူတွေက ဟန်ဆောင်ကောင်းပါတယ်။
အချစ်တစ်ခုစတင်ဖို့ လွယ်သလောက် အဲ့ဒီအချစ်ကို ရေရှည်တည်တံ့အောင်ထိန်းထားဖို့ဆိုတာတော့ မလွယ်လှပါဘူး။ ဒါဆို ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အချစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ ချစ်သူနှစ်ဦးလုံးထားရှိသင့်တဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေကို သိရှိထားဖို့လိုပါတယ်။ ကဲ… ဒါဆို အချစ်တစ်ခုရေရှည်တည်တံ့ဖို့…
ကြာရှည်တဲ့ Relationship တစ်ခုကို ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ အချိန်တွေ၊ ငွေတွေ၊ ခံစားချက်တွေ အားလုံးကို မြုပ်နှံထားခဲ့ရတာပါ။ ပျက်စီးသွားတဲ့ RS တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘာမဟုတ်တဲ့…